Atletisma – «Mada 2017» : nanamontsana zava-bita vaovao i Nantenaina | NewsMada
Atletisma – «Mada 2017» : nanamontsana zava-bita vaovao i Nantenaina
Nisy ny zava-bita vaovao montsana teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja atletisma. Nohatsarain’i Nantenaina Frederic, atletan’ny 3FB, ny fe-potoana teo amin’ny 100 m sokajy “junior”.
14 taona aty aoriana vao montsana ny zava-bita tsara indrindra eo amin’ny halaviran-dalana 100 m, sokajy “junior”. Nomontsanin-dRakotoarinirina Nantenaina Frederic, mpihazakazaka avy amin’ny klioban’ny 3FB Analamanga, mantsy ny zava-bitan’i Manandaza Tiarison, izay nahavita izany, tao anatin’ny 10 s 69 %.
Nohatsarain’i Nantenaina Frederic ho 10 s 56% indray izany. Fe-potoana, tontosany nandritra ny fifaninanam-pirenena sokajy rehetra, natao ny asabotsy lasa teo, teny amin’ny kianjan’Alarobia. Marihina fa efa nanao pao-droa, teo amin’ny 100 m sy 200 m, ny tovolahy, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, sokajy zandriny, natao ny 11 jona lasa teo.
Tsiahivina fa hisolo tena an’i Madagasikara, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy “junior”, hatao any Alzeria ny 27 jona ka hatramin’ny 2 jolay ho avy izao, i Nantenaina.
Ankoatra azy, nanatsara zava-bita teo amin’ny halavirana 5 000 m marche, ho an’ny sokajy “cadette”, ihany koa Rasoanandrasana Herline Stéphanie, avy amin’ny klioba Aspenato, Atsimo Andrefana. 30 mn 20 s 79 % ny nahavitany io halaviran-dalana io. Marihina fa Rasoamanantena Onisoa Clara, avy amin’ny Ajat, ny tompon’ny zava-bita farany, izay nahatontosa izany, tao anatin’ny 30 mn 38 s 65%.
Nanjakan’ny atleta avy amin’ny ligin’Analamanga ity fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara ity, narahin’ireo avy amin’ny ligin’Atsimo Andrefana. Ankoatra ireo mpihazakazaka malagasy, nisy koa fandraisana anjaran’ireo avy atsy amin’ny Nosy La Réunion. Na nahazo voalohany aza anefa izy ireo, tsy noraisina satria tsy tafiditra ao anatin’ireo izay miady ny ho tompondakan’i Madagasikara 2017.